PCB Muunado Golaha-saareyaasha - Shiinaha PCB Muunado Golaha Shirkado & Factory
Golaha Gudiga Xakamaynta Gawaarida
Golaha PCc-ga jaban
Kiniiniga PCB Turnkey PCB Assembly Electronic
Guddiga Xakamaynta Warshadaha Golaha Turnkey
Golaha Gudiga Xawaaraha Sare ee FPGA
Golaha Ems PCB
Golaha Xakamaynta Daabacaadda Golaha Maamulaha
Kaadhka Wareegga Assy
Qiimaha Low PCB Daabacaadda Oo Golaha-saareyaasha ...
Shiinaha PCB Cheap Manufacturing Iyadoo Qaybaha Comp ...
Shiinaha Cheap smd PCc soo saaraha xigasho - Ems ...
PCBFuture waxay u fidisaa macaamiisheenna adeegga isku-kalsoonida Turnkey PCB ee isku-kalsoon ee gaadha natiijooyin tayo wanaagsan leh qiimaha tartanka. Adeegga iskuxirka 'Turnkey PCB service' oo ay kujirto PCB been abuur, Waxyaabaha laga soocayo, iskuxirka PCB iyo Imtixaanka. Maaddaama ay tahay shirkad hoggaamineed shirkad isku-dhafan oo wareegsan, PCBFuture waxay diiradda saareysaa dusha sare iyo iyada oo loo marayo isku duubnaanta godadka, dhammaan nidaamyadeena iyo mashiinnadayada loo qaabeeyey inay la kulmaan naqshadeynta, qeexitaanka iyo mugga adeegyada shirarka elektaroniga.
Iskuxirka guddiga xakamaynta
Si loo hubiyo in alaabada cusub ee elektaroonigga ah ay kaamil yihiin ka hor inta aan la bilaabin suuqa, waxaan u baahanahay inaan tijaabino noocyada ka hor wax soo saarka ballaaran. Been abuurka PCB iyo shirkii PCB ayaa ah geedi socod lagama maarmaanka u ah soosaarka PCBeekeyga noocyada hore. Golaha PCB noocooda waxaa loo isticmaalaa baaritaanka shaqeynta, sidaa darteed injineerada ayaa qaabeyn kara oo hagaajin kara cayayaanka qaarkood. Mararka qaarkood waxay ubaahan kartaa 2-3 jeer, oo hel shirkad iskuxira qalabka korontada lagu kalsoon yahay ayaa muhiim ah.
PCBFuture wuxuu mas'uul ka yahay dhammaan golaha PCB-ga wax soo saarka PCB, soo iibinta qaybaha, isku imaatinka SMT, iyadoo loo marayo isku imaatinka daloolka, baaritaanka iyo gaarsiinta. Maaddaama aan nahay shirkad horseed u ah soo saaraha shirarka elektiroonigga ah ee bixiya mugga adeegyada isku-imaatinka PCB, waxaan hubineynaa in alaabadaadu ay gebi ahaanba bilaash tahay oo qiimo jaban yihiin.
Gudaha PCBFuture, waxaan qaadaa talaabooyin qaas ah si aan u hubino in tayada shaqadeena ay la mid noqoto kana badato waxyaabaha ay ka filayaan macaamiisheenu. Kooxdayadu waxay adeegsadaan teknolojiyadda iyo qalabka PCB-da ugu dambeeyay si ay ula kulmaan baahida tayada. Waxaan u heellan nahay bixinta alaab iyo adeegyo tayo leh waxay naga caawiyeen inaan kasbano kalsoonida iyo ixtiraamka macaamiisheenna.
Adeegyada Golaha Flex PCB
PCB debecsan, oo sidoo kale loo yaqaan elektaroonigga jilicsan, guddiga wareegga wareegga, Flex PCB, wareegyada wareegsan, waa nooc ka mid ah qalabka elektarooniga ah adoo ku dhejinaya qalabka elektarooniga ah substrate balaastig ah oo jilicsan sida polyimide, PEEK ama filim hufan oo hufan. Intaa waxaa sii dheer, wareegyada jilicsan ayaa laga yaabaa inay noqdaan shaashad daabacan oo wareeg ah oo qalin ah oo ku taal polyester.
PCBFuture waa soo saar PCB iyo Shirkadda Golaha PCB. Iyadoo in ka badan 20 sano oo heer sare ah, karti heer caalami ah iyo horumar la taaban karo, PCBFuture waxay soo martay waddo dheer oo ay ku noqonayso mid ka mid ah kuwa hormoodka u ah Shiinaha samaynta PCB iyo soo saarayaasha maanta. Waxaan diirada saareynaa nidaamyo tayo sare leh oo dhaqaalo leh oo ay weheliso iswaafajin aan la barbardhigi karin ayaa naga dhigtay inaan nahay xul xulasho dhan Shiinaha.
PCBFuture waxay siisaa tan ugu fiican been abuurka PCB iyo adeegyada Golaha. Waxaan haynaa ilaalin ESD oo dhameystiran iyo adeegyada baaritaanka ESD oo ay caawinayaan shaqaale u heelan xirfadlayaal. Tobankii sano ee la soo dhaafay, PCBFuture wuxuu sii waday inuu koro oo uu horumariyo maxaa yeelay marwalba waxaa naga go'an inaan bixino adeegga macaamiisha ugu fiican iyo tayada wax soo saarka.
Golaha Gudiga Qalabka Qalabka
Awoodayada Golaha PCB-ga waxay macaamiisheenna siinayaan ku habboonaanta "One Stop PCB Solution" ee ku saabsan been-abuurka PCB-ga iyo baahiyaha Golaha. Xirfadeena waxaa ka mid ah Surface Mount (SMT), Thru-hole, Teknolojiyada isku dhafan (SMT & Thru-hole), Meeleyn Mid ama Labo Dhinac ah, Qeybaha Fiican ee Goobaha, iyo inbadan.
Golaha Guud PCB Golaha Shiinaha
PCBFuture waxaa ka go'an inay siiso tayo sare iyo dhaqaale wax soo saarka PCB iyo One adeegga PCB kulanka shirkii dhammaan macaamiisha adduunka. Laga soo bilaabo nooc-soo-jeedinta deg-degga ah, mugga hooseeya ee isku-dhafka sare illaa wax-soo-saarka mugga badan, waxaan had iyo jeer maskaxda ku haynaa in tayada ugu sareysa, bixinta waqtiga, qiimaha tartanka iyo adeegga aan fiicnayn ay yihiin habka kaliya ee lagu guuleysto daacadnimadaada. Tani waxay kuu oggolaaneysaa, macaamiisha sharafta leh, inaad diirada saarto meheraddaada aasaasiga ah si fiicanna loo hubiyo in baahiyahaagu ay ku jiraan gacmo aamin ah oo khibrad leh.
Golaha PCB Main
PCBFuture waxay diiradda saareysaa macaamiisha la siinayo adeegyo tayo sare leh oo been abuur PCB ah iyo adeegyo gaarsiin degdeg ah oo waqtigooda ku habboon. Haddii aad leedahay shuruudo ku saabsan soosaarida PCB-ga deg degga ah, waxaan nahay xulashadaada wanaagsan. Waxaad kaheli kartaa waxaad ubaahantahay xaga xawaaraha, waxtarka, tayada iyo qiimaha halkan.
Golaha Fiilooyinka Daabacan
PCBFuture waa shirkad heer sare ah oo shahaadeysan, qandaraas elektaronik been abuur ah oo siineysa Golaha PCB, sameynta PCB, iyo adeegyada furaha PCB. Qalabkayaga, nidaamyadeena iyo hanaankeena ayaa lagu hagaajiyay dabacsanaanta dhismaha alaabooyin isku dhafan oo leh shuruudaha dhexdhexaadka / isku dhafka sare. PCBFuture waxay ku wanaagsan tahay bixinta tayada Daabacidda Wareegga Naqshadeynta iyo noocyada Turnkey iyo xalalka wax soo saarka bulshada elektaroonigga ah.
Adeegyada Golaha Maamulka Korantada ee Smart Controller
Golaha Guddiga Daabacan ee Daabacan, oo sidoo kale loo yaqaan PCBA, ayaa ah geeddi-socodka lagu kordhinayo qaybaha kala duwan ee elektarooniga PCB-ga. Guddiga wareegga ka hor intaan la isu geyn qaybaha elektarooniga ah waxaa loo yaqaan PCB. Ka dib markii qaybaha elektarooniga ah la iibiyo, looxyada waxaa loo yaqaannaa iskuxirka guddiga wareegga daabacan (PCBA). Raadadka ama dariiqyada tabinta ee lagu xardhay go'yaasha naxaasta ah ee PCB-yada waxaa lagu dhex isticmaalaa substrate aan dabiici ahayn si loo sameeyo golaha. Ku soo lifaaqa qalabka elektarooniga ah PCB-yada waa ficil gabagabeyn ka hor inta aan la adeegsan qalabka elektarooniga ah ee si buuxda u shaqeynaya.